Maxaa laga filan karaaa shirka maamul goboledyada ee Baydhabo ka furmayo Maanta? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa laga filan karaaa shirka maamul goboledyada ee Baydhabo ka furmayo Maanta?
Maxaa laga filan karaaa shirka maamul goboledyada ee Baydhabo ka furmayo Maanta?
Baydhabo (Caasimadda Online) – Waxaa Maanta Magaalada Baydhabo ee Xarunta Maamulka Koonfur Galbeed si rasmi ah uga furmi doono shir ay isugu imaanayaan Madaxda maamul Goboleedada dalka.
Shirkaan ayaa imaaday kadib markii uu sii xoogeystay khilaafka Madaxda Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe, gaar ahaan arrinta Khaliijka.